Inona no atao hoe Volatility? - Cazoo
Home » Home » Inona no atao hoe Volatility?
tenifototra: bitcoin, BVOL, ethereum, Litecoin, Volatility
Amin'ny lafiny ara-bola, ny tsy fetezana dia mamaritra ny haingana sy ny vidin'ny fiovana iray. Matetika dia isaina amin'ny lafiny faneva mahazatra ny fiverenan'ny fananana isan-taona mandritra ny fotoana voafaritra. Satria io dia refesin'ny hafainganana sy ny haavon'ny fiovan'ny vidiny, ny tsy fetezana dia matetika ampiasaina ho fepetra mahomby amin'ny risika amin'ny fampiasam-bola ho an'ny fananana rehetra.
Ny tsy fetezana eo amin'ny tsena nentim-paharazana
Ny volatility dia matetika resahina eo amin'ny tsenambola, ary noho ny maha-zava-dehibe ny fanombanana ny risika dia misy rafitra napetraka amin'ny tsena nentim-paharazana (antsoina hoe index index) handrefesana ary mety haminavina ny haavon'ny fiovan'ny ho avy. Ohatra, ny Index of Volatility (Board Board Exchange Exchange) (VIX) ao amin'ny tsenambarak'i Etazonia dia ampiasaina. Ny index VIX dia mampiasa ny vidin'ny safidy S & P 500 handrefesana ny tsy fetezan'ny tsena amin'ny varavarankely 30 andro.
Na dia mifamatotra amin'ny fitoviana aza ny ankamaroany dia manan-danja ihany koa ny tsy fetezana amin'ny tsena nentim-paharazana. Tamin'ny taona 2014, ny CBOE dia nanangana index vaovao miovaova ho an'ny Treasury US 10 taona izay mandrefy ny fahatokisan'ny mpampiasa vola sy ny loza mety hitranga amin'ny tsenan'ny fifamatorana. Na dia vitsy aza ny fitaovana misy handrefesana azy, ny tsy fetezana dia singa iray manakiana ihany koa amin'ny fanombanana ny fahafaha-manao eo amin'ny tsenan'ny fifanakalozana ivelany.
Ny fihenan'ny tsenan'ny cryptocurrency
Tahaka ny amin'ny tsena hafa, ny tsy fetezana dia refy iray lehibe amin'ny risika amin'ny tsena cryptocurrency.
Noho ny toetrany nomerika, ny haavon'ny lalàna mifehy azy ireo ankehitriny (Holy Decentralisation) ary ny haben'ny tsena, ny vola crypto dia miovaova be noho ny ankamaroan'ny kilasy fananana hafa.
Ity haavon'ny volatility ambony ity dia tompon'andraikitra amin'ny fampitomboana ny fahalianana amin'ny famatsiam-bola cryptocurrency, satria namela ny mpampiasa vola sasany hahatsapa fiverenana lehibe ao anatin'ny fotoana fohy. Ny fihenan'ny tsenan'ny cryptocurrency dia mety hihena mandritra ny fotoana maharitra vokatry ny fananganana sy fitomboan'ny tsena midadasika miaraka amin'ny lalàna mifehy kokoa.
Rehefa nanjary matotra kokoa ny tsenan'ny cryptocurrency, dia lasa liana kokoa ny mpampiasa vola amin'ny fandrefesana ny volany. Noho io antony io dia misy ny index indicactabilités ho an'ny sasany amin'ireo crypto lehibe. Ny tena manamarika dia ny Bitcoin Volatility Index (BVOL), saingy misy kosa ny indati-taham-pahavoazana mitovy amin'izany hanarahana tsena cryptocurrency hafa, anisan'izany ny Ethereum sy Litecoin.
Lahatsoratra talohaInona no atao hoe Flippening eo amin'ny tontolon'ny Cryptocurrencies?
Lahatsoratra manarakaInona ny Ethereum?